5 Antony tokony hamerenan'ny vondrom-piarahamonina | Green Renewable
5 Antony tokony hanodinana ny vondrom-piarahamonina iray
El fanodinana fako no rafitra tsara indrindra amin'ny fanariana farany ny fitaovana sy ny vokatra heverina fako. Ireo zavatra izay tsy azo ampiasaina intsony amin'ny tanjona namoronana azy ireo na nahavita ny tsingerin'ny fiainany dia tokony haverina simba.
Ny fako mafy an-tanàn-dehibe dia ahiana ho an'ny tanàna sy tanàna rehetra satria tsy maintsy mitantana fako taonina isan'andro izy ireo. Ny 90% ny fako ateraky ny tontolo iainana dia azo averina ahodina.
Misy antony 5 tokony hamporisihan'ny vondrom-piarahamonina iray hampivelatra ny fanodinana.
Mihena ny fanangonana fako any amin'ny fanariam-pako, sorohina ny olan'ny fahasalamam-bahoaka, ny cfandotoana Ny rano, ny rivotra, ny tany ary ny olana eo amin'ny tontolo iainana toy ny fandripahana ala, sns.
Ny tombom-barotra lehibe dia azo alaina amin'ny fivarotana vokatra sy fitaovana aorian'ny fanodinana. Ankoatry ny fitsitsiana angovo ary ny harena voajanahary amin'ny famokarana vokatra vaovao.
Ny famerenana amin'ny laoniny dia mahatonga azy io maharitra maharitra Rafitra fitantanana mandany ary manatsara ny fahadiovana eo amin'ny fiarahamonina.
Ny hetsika famerenana fanodinana dia mitaky ny vondrona ara-tsosialy rehetra hivoatra araka ny tokony ho izy, ka hanamafisana ny fifamatorana sy ny fananan'ny olona sy ny orinasa ao anatin'ny fiarahamonina.
Ity fomba fanao tsotra ity dia manampy amin'ny fanabeazana ny ankizy ny maha-zava-dehibe ny fikarakarana ilay zaza. tontolo iainana sy ny fiantraikany amin'ny kalitaon'ny fiainana.
La indostrian'ny fanodinana tsy maintsy hamafisina sy hivoatra izy io ho andry ara-toekarena mifandraika amin'ny isam-pokontany, tsy hoe hampihena ny fako fotsiny fa ho fomba hamoronana asa sy vokatra vaovao avy amin'ny singa voaverina, ary koa hahazoana tombony amin'ny ambaratonga eo an-toerana.
Zava-dehibe ny fanodinana ireo karazana fako rehetra satria tena maro be ireo tombony ary mitatra rehefa mandeha ny fotoana. Mandresy ny fanjakana, orinasa tsy miankina, fikambanana sosialy ary ny fiarahamonina iray manontolo rehefa voahodina izy io.
Ilaina manokana ny fanoloran-tena ho an'ny tena manokana sy ny fiaraha-monina Programs an'ny fanodinana ho lavitra, hahomby ary hihamaro. Ny fitaratra dia iray amin'ireo ohatra tsara indrindra, satria io no vokatra azo haverina indrindra eto an-tany.
Ny fahazoana vokatra hafa hahatratrarana fanodinana avo lenta dia mitaky fotoana sy asa fanentanana ny tontolo iainana matanjaka, saingy azo tratrarina izany, afaka miara-miasa isika rehetra ka maro no voaverina ary ny planeta madio sy salama kokoa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Trano maintso » 5 Antony tokony hanodinana ny vondrom-piarahamonina iray
Marlyn Daniela Figueroa CASTRO dia hoy izy:
IZAHAY TSY MAINTSY TOKONY HANDEHA REHETRA NY ZAVATRA REHETRA MBOLA HANATITRA BOTOTRA plastika miaraka amin'ny SHAN'NY BANANA
Valiny tamin'i Marlyn Daniela Figueroa CASTRO
aries dia hoy izy:
Tena tiako ilay fampahalalana
, tena nanampy
Valiny ho an'ny aries
Vokatra biolojika miorina amin'ny mpamaky aluminium